भारतीय सुरक्षा बलको सहयोगमा १८ बालबालिकाको उद्धार, २ नेपाली तस्कर पक्राउ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भारतीय सुरक्षा बलको सहयोगमा १८ बालबालिकाको उद्धार, २ नेपाली तस्कर पक्राउ
डिसी नेपाल , २४ जेठ २०७५
भीमदत्तनगर । नेपाल प्रहरीले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को सहयोगमा छ नाबालिका र १२ बालकसहित १८ बालबालिकाको पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट आज उद्धार गरेको छ ।
इलाका पहरी कार्यालय गड्डाचौकीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक डिकरदेव पन्तले भारतीय सुरक्षा बलको सहयोगमा बालबालिकाको उद्धार गरेको जानकारी दिए ।
उद्धार गरिएका बालबालिका अछामको ढकारी गाउँपालिका–७ का रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बालबालिकालाई फकाएर भारततर्फ लगिरहेका ढकारी गाउँपालिकाकै ५३ वर्षीय रामबहादुर बुढा र ४८ वर्षीय रतन विकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
उनीहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । बालबालिकालाई माइती नेपाल कञ्चनपुरको आश्रयमा राखिने प्रहरीको भनाइ छ ।